Nepal: Mankany amin’ny fankalazàna ny Dashain tsy misy fanaovana sorona ireo biby · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Oktobra 2009 7:58 GMT
Ny fety be ara-pinoana manan-danja indrindra any Nepal, Dashain dia hifarana amin'ity taona ity ny Sabotsy 3 Oktobra. Ity andro ity dia natokana ho an'ny Andriamani-bavy Hindu izay Andriamanitry ny fahasalamana sy fahombiazana, izay antsoina ihany koa hoe Kojagrat Purnima. Manamarika ny fiafaran'ny dimy ambinifolo andron'ny fety fankalazana izy ity.
Hindupad, blaogy momba ny Hindoisma, dia manazava ny momba ireo andro samihafa amin'ny Dashain:
“Tamin'ny andro voalohan'ny Dashain, nodinihana manokana ny Ghatasthapana puja ary ny Dashain Ghar, na noravahana ny efitra voatokana hivavahana. Nandritra ny Dashain, i Saptamatrikas (Reny masina 7), Ashtamatrikas (Andriamani-bavy Tantrika 8) ary Andriamani-bavy Nava Durga (ireo endrika 9 hanehoana ny Durga) no nasandratra. Aparitaka eny amin'ireo tavy vita avy amin'ny tany (ghata) ny “orge” sy ny vary ary ao aorian'ny folo andro dia mitsimoka ireo voa. Manamarika taon-jina izany. Ireo teratany Nepaley tsy mipetraka any an-tanindrazany dia miverina any daholo mba hankalaza ny Dashain.”
Nandritra ny andro dimy farany tamin'ny fety be, dia nahazo tsimoka antsoina hoe jamara avy any amin'ireo zokiolona ny mponina ho toy fitahiana avy amin'ny Andriamanitra vavy Durga miaraka amin'ny tika (vary afangaro amin'ny vermillon vovony sy yaourt [habobo]).
Jamara nambolena ho an'ny Dashain, sary avy amin'ny Bhumika Ghimire
Niraina ny hiram-pivavahana Sanskrit tamin'ny fotoana nanoloran'ireo zoky olona ny jamara sy tika. Ireo lehilahy nihira ny “‘Aayu Drona Sute” ary ireo vehivavy kosa dia ny “Jayanti mangala kali” .
Nepaleselaw manazava ny dikan'ny andàlana voalohany amin'ny “Aaayn Drona Sute”:
“Ny dikan'ny ‘Aayu Drona Sute’ amin'izao fotoana dia hoe Mba ho ela velona toy ny Zanakalahin'i Drona anie ianao. Ny zanak'i Drona dia antsoina hoe Asosthama, izay lazaina ho iray avy amin'ireo Aastha Chiranjivi (Aastha Chiranjivi dia ireo olona valo velona mandrakizay amin'ny finoana Hindu ). Noho izany, rehefa misto-drano ireo zanany ny raiamandreny hoe ‘Aayu Drona Sute’, dia midika hoe ataovy ho ela andro iainana ohatran'i Asosthama ny zanako………midika izany fa tsy ho faty mandrakizay ianao”
Ity hira ity koa dia mirary fahombiazana, famotehana ireo fahavalo ary fandresena. Esty andaniny, ny Jayanti mangala kali dia vavaka atao amin'ny Andriamanitra vavy fa misy hàtaka mihitsy na iray aza .
Ho an'ny diaspora avy any Nepal, ny Dashian dia fotoana manokana manindrona ny fo. Lavitry ny akany niaviany, ny fianakaviany sy ny namany, dia miezaka izy ireo manao fety fankalazana miaraka. Ity fety ity dia manome azy ireo fahafahana mifankahita amin'ny teratany Nepaley hafa, mamisavisa ny an'ny an-tanàna sy miara-miravoravo.
Bhumika, taorian'ny nandraisany ny tika sy jamara
RangeenChara, blaogin'ny diaspora Nepaley, mitantara ny fankalazàna ny Dashain tany ivelan'i Nepal. Ny Dashain koa dia fety be izay manana ny “gadon-kirany” manokana. Ny gadon-kira Malshri dia natao nandritra ny fankalazàna, izay raisina ho mitory hoavy tsara.
Ity ny mpanakanto Nepaley Sur-Sudha izay mikalo ny Malshri.
Tamin'ity taona ity dia nisy tsy fifankahazoana kely tamin'ny Dashain tany Nepal, noho ireo mpiaro ny zon'ny biby niantso fampitsaharana ny fanaovana sorona ny biby mandritra ny fankalazana. Ireo osy, ondry, omby ary ireo akoho dia atao sorona ara-pomba ary omena ny Andriamanitra vavy.
AnimalRightsNepal miantso amin'ny fanaovana ny fetin'ny Dashain mifanaraka kokoa amin'ny maha-olona :
“Ireo bokin'ny finona Hindoisma dia miresaka ny fiarovana ity planeta ity sy ireo miaina rehetra eto mba hananana tontolo tsara, noho izany ajanony ny famonona sy fanaovana sorona ireo biby amin'ny anaran'Andriamanitra. Ankalazao lavitry ny rà sy ny hena ny Dashain. Vonjeo ny biby, vonjeo ny tontolo iainana.”
Vondron'olona maro, ao anatin'izay ireo mpikatsaka Nepal mandry fahalemana, dia nivondrona mba handràra ny fanaovana sorona ireo biby ao amin'ny firenena. Hatramin'izao aloha, mahavelom-panantenana ny fihetsiky ny olona nefa hatramin'izao aloha dia tsy mbola nahitàna fnambaràna ofisialy momba ity resaka ity.
Na eo aza ireo tsy fanekena, ireo fandresen-dahatra ara-pinona maro na koa ny fahasarotana ara-politika sy ekonomika any Nepal, ny Dashain dia ankalazaina ohatran'ny fotoana mampiravoravo ary mitoetra hatrany ho fety be mampifandray ny olona.
19 ora izayNepal